Danjiraha Eretria u fadhiya Nairobi oo beeniyey in dalkiisu caawiyo Al-shabaab. – Radio Daljir
Danjiraha Eretria u fadhiya Nairobi oo beeniyey in dalkiisu caawiyo Al-shabaab.
Nofeembar 11, 2011 12:00 b 0
Asmara, Nov, 11 ? Safiirka dawladda Eretria u fadhiya magaalada Nayrobi ee dalka Kenya ayaa been iyo waxba-kama jiraan ku tilmaamay in dawladdiisu ay caawiso kooxda Al-shabaab.
Mr. Beyone Russom oo u waramay wakaaladda wararka ee AP ayaa sheegay in dalkiisa ay wali saaran tahay cunaqabatayn xagga hubka ah, waxaana uu intaasi ku daray dhaq-dhaqaaqyada la xiriira dhinaca hubka inay fiiro gaar ah u leeyihiin oo had iyo goor ay kormeeraan dawladda Maraykanka iyo erko ka socota Qaramada Midoobay (QM).
Safiirka Eretria ee fadhigiisu yahay magaalada Nairobi, waxaa uu meesha ka saaray gabi ahaanba inay kooxda Al-shabaab ku caawiyeen saddex diyaaradood oo hubsida, kuwaasoo ka dagay garoonka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.
Mr. Beyone waxaa uu tusaale u soo qaatay in caalamku yahay mid isku xiran, isla markaana la arki lahaa diyaaradahaasi markii ay kor-marayeen hawada dalka Jabuuti, ama badda Cas.
Hadalkaan kasoo yeeray danjiraha Kenya u fadhiya dalka Eretria Mr. Beyone Russom ayaa kusoo aadaya, xilli ay Kenya si wayn arrintaasi ugu eedeysay xukuumadda Asmara, waxaana dawlado badan oo caalamka ah ay aaminsan-yihiin in dalka Eretria uu xiriir wanaagsan la leeyahay kooxda Al-shabaab.
Dawladda Puntland oo Somaliland ku eedaysay faragalinta qabaa?ilka ku dhaqan deegaanka Ceerigaabo ee gobolka Sanaag.